ShweMinThar: “သတို့သမီးလောင်းတွေ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ သားဆက်ခြားနည်းများ”
မင်္ဂလာခန်းမကြီးထဲ ~ ဒီမင်္ဂလာခန်းမကြီးထဲ ~ တို့နှစ်ဦးလက်တွေတွဲ ခိုင်မြဲသောအချစ်တွေ သက်သေထူမယ်
တစ်သက်မှာ တစ်မင်္ဂလာ ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကို သိပ်တန်ဖိုးထားကြတယ်။ လွယ်လွယ်မတည်ဆောက်တတ်ကြသလို၊ လွယ်လွယ်နဲ့လည်း အိမ်ထောင်တစ်ခုကို အဆုံးသတ်လေ့ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ချစ်သူနှစ်ဦး ဘ၀တစ်ခုကို အတူဖြတ်သန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလေးကို တစ်သက်လုံးအမှတ်တရ ဖြစ်နေအောင် စီစဉ်ကြတယ်။ Pre-wedding photo ကို စိတ်ကူးဆန်းဆန်းနဲ့ လှလှလေးတွေ ရိုက်မယ်၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို ခမ်းခမ်းနားနား လုပ်မယ်၊ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အခမ်းအနားကို ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်မယ်၊ ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးကောင်းရင် ကောင်းသလို၊ တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလို အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးကြတယ်။
ကျောင်းဆက်တက်ရဦးမယ်၊ အလုပ်တွေလုပ်ရဦးမယ်၊ စီးပွါးရှာရဦးမယ်၊ ဒီလိုအချိန်မှာ မလိုချင်သေးဘဲနဲ့ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ဘယ်လိုတားထားကြမလဲ၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ ရှိသလဲ၊ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
အကြမ်းအားဖြင့် နည်းလမ်း(၄)ခုရှိတယ်။ ကွန်ဒုံး၊ နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ်၊ ထိုးဆေး၊ လက်မောင်းတွင်းထည့်ပစ္စည်း တွေပါ၊၊
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်းကတော့ ကလေးတစ်ခါမှ မမွေးဖူးသေးတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ ကလေးမမွေးဖူးသေးတာမို့ ထည့်ရခက်တတ်တယ်။ နောက် ထည့်ရင်းနဲ့ မတော်တဆပိုးဝင်သွားရင် ကလေးမရနိုင်တော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနည်းလမ်းကိုက ကျန်တာတွေ ဘာတစ်ခုနဲ့မှ သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မှပဲ စဉ်းစားတယ်။
နောက်ပြီး သုတ်ရည်အပြင်ထုတ်တဲ့နည်း၊ ရက်ရှောင်တဲ့နည်းတို့လို သဘာဝနည်းလမ်းတွေကတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူး ဆိုပေမယ့် အမှားအယွင်းများတယ်၊ မှားလို့ရှိရင် ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ချရတဲ့ သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခုခုကို သုံးတာတော့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
– ဟော်မုန်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ (ဥပမာ ခေါင်းမူးတာ၊ ဇက်ကြောတက်တာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းတာ) မခံစားရဘူး၊ ကျန်တဲ့နည်းလမ်း(၃)ခုလုံးမှာ ဒါတွေခံစားရနိုင်တယ်။
– ဘယ်သူမဆို အသုံးပြုလို့ ရတယ်၊ မတည့်တဲ့သူဆိုတာ မရှိဘူး။ (ရှားရှားပါးပါး Latex allergy ရှိသူကလွဲရင်)
– ဆရာဝန်၊ ဆရာမအပေါ် မှီခိုနေစရာ မလိုဘူး၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သုံးနေရုံပဲ။
– အတူနေတိုင်းမှာ အသုံးပြုရမယ်၊ အသုံးပြုနည်းမှန်ရမယ်၊ အမျိုးသားရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုတယ်၊ သူသုံးမှ ရမယ်၊ (အမျိုးသားအများစုက အိမ်ထောင်ကျစ မင်္ဂလာဦးညမှာ ဒါကိုသုံးဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိလှတာကိုတော့ သတိထားမိတယ်)။
– ဒီဆေးသောက်ဖို့အတွက် ဆရာဝန်၊ ဆရာမအပေါ် မှီခိုစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ၀ယ်ပြီး သောက်နေရုံပဲ၊ ကိုယ်အိမ်ထောင်သည်မှန်း လူမသိစေချင်ဘူး၊ ဆေးခန်းသွားပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ပြရ၊ ပြောရတာမျိုး မလုပ်ချင်ဘူးဆို ဒီနည်းလမ်းက အဆင်ပြေတယ်။ (ဒါပေမယ့် ပထမဆုံး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါမယ်၊၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်း၊ သောက်ပုံသောက်နည်း၊ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မှုရှိမရှိ မေးမြန်းပြီး ဆရာဝန်က သောက်ဖို့သင့်တယ်ဆိုမှ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်)
– နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ် ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့တစ်လုံး မှန်မှန်သောက်ဖို့ လိုတာပဲ။ မနက် ည သောက်ချင်သလို သောက်လို့လည်း မရဘူး။ အတိအကျကြီး မဟုတ်တောင် ပုံမှန်လေးဖြစ်ဖို့တော့ လိုတယ်။ ဒီတော့ ဒီနည်းလမ်းကို ရွေးမယ်ဆို ဆေးကို နေ့တိုင်းမှန်မှန်သောက်နိုင်ဖို့ လိုတယ်၊ မေ့ခဲ့ရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း သိထားဖို့ လိုတယ်။
– သူ့ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ သုံးလမှတစ်ခါ ထိုးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်။
– ဆေးထိုးပေးမယ့် ဆရာဝန်အပေါ် မှီခိုနေရတယ်၊၊ တစ်နေရာရာများ အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆို ဆေးထိုးပေးမယ့် ဆရာဝန်ကို အရင်ရှာရမယ်။
– ရာသီမပေါ်တတ်တာကလည်း ရာသီပေါ်မှကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျ အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
– အဓိကအရေးကြီးဆုံး သိထားရမယ့် အားနည်းချက်တော့ သူက ဆေးထိုးရပ်ရပ်ချင်း ကိုယ်ဝန်ပြန်မရနိုင်တာပဲ။ လအနည်းငယ်လောက် စောင့်ရတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးယူမယ်ဆို မြန်မြန်ရမှ ဆိုတဲ့ စုံတွဲမျိုး (ဥပမာ နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်လုပ်တော့မယ့်သူတွေ) ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို သတိထားသုံးစွဲသင့်တယ်။
– နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာလိုဖြစ်နေတော့ ထည့်ပေး၊ ပြန်ထုတ်ပေးမယ့် ဆရာဝန်လိုတယ်၊ အဲဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခုကို သွားရလိမ့်မယ်။ (ဆရာဝန်တိုင်း ဆေးခန်းတိုင်းမှာ မရနိုင်သေးဘူး) ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးခန်းအနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး သောင်းဂဏန်းကနေ သိန်းဂဏန်းအထိ ပေးရနိုင်တယ်။ ထုံဆေးပေးပြီး ပစ္စည်းကို လက်မောင်းအရေပြားအောက် ထည့်လိုက်တာပါပဲ။ ခွဲစိတ်မှုကြီး လုပ်တာမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် ကြောက်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ။
ဒါတွေကတော့ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို စဉ်းစားရလွယ်အောင် ယှဉ်ပြောပြပေးလိုက်တာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကလေးယူဖို့ စီစဉ်ထားတာတွေ၊ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရည်မှန်းထားတာတွေ မတူကြသလို၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းလည်း မတူကြတာမို့ သူ ဒါနဲ့အဆင်ပြေလို့ ကိုယ်လည်း လိုက်သုံးမယ် လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဘယ်နည်းလမ်းမှလည်း စင်းလုံးချော မဟုတ်ဘူး၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းကို ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Breast Cancer နဲ့ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးများ
ဟေမာနေ၀င်း ၏ သီချင်း ၂၂၆ ပုဒ် စုစည်းမှု
နယ်က ဟင်းလေး သုံးခွက်
ဆေးမြီးတိုများနှင့် လွဲမှားနေသော အယူအဆ များ
Conjugated Linoleic Acid (CLA) ဆိုတာဘာလဲ?
အဆုတ်တွေကို သန့်ရှင်းစေမည့် ဆေး
ခေတ်သစ် အိမ်ရှင်မများအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် မီဖိုချေ...
စီရော်နယ်ဒို (CR7) ဘာကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သလဲ
“သတို့သမီးလောင်းတွေ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ သားဆက်ခြားနည်...
ပုဇွန်ကင် - ၀တ်ဆီဖတ်ကြော်သုပ် - ကြက်သားအချောင်းကြေ...
Vape ဆိုတာ ဘာလဲ?
လက်မထပ်ခင် ဘယ်နှစ်ရက်ကြိုပြီး ကိုယ်ဝန်တားသင့်သလဲ
တရုတ်ရိုးရာ လမုန့်ပွဲတော် 中秋节
“ကျိုးကြေသွားသော အတ္တတစ်ခု၏ ခေါင်းလောင်းကွဲစ”